दशैंको टीकाको मन्त्र नेपालीमा पनि भनौं है « LiveMandu
१२ आश्विन २०७६, आईतवार ०७:१०
दशैंमा टीका ग्रहण गर्दा मान्यवरहरुले भनेंर लगाउने आर्शिवाद अनि त्यसको महत्व संस्कृत भाषामा पढिन्छ, टीका लगाँउदै पढिने यस्ता मन्त्रहरु को सरल अनुवाद नेपालीमा नभनिदिँदा कैयन संस्कृत नबुझ्ने पुस्ताहरु मन्त्रको बिशेषता र ज्ञान बाट बञ्चीत छन् । हामीमध्य पनि धेरैले धेरै पटक यस मन्त्रोच्चारण संगै टीको नथापेका कहाँ हौं र ? तथापि अर्थ भनें खासै थाहा नहुन सक्छ, हैन र ?
महिला अनि पुरुषहरुका लागि बेग्लाबेग्लै मन्त्र रहेका छन् जसमा पौराणीक चरित्रहरु संग दाँजेर ति अनुसारका गुणहरु टीका ग्रहण गर्ने व्यक्तिमा होस् भनि आशिष दिईन्छ । यसपालाको दशैंबाट यी मन्त्रहरु लाई सरल नेपाली भाषामा सबैले बुझ्ने गरि पनि दोहोर्याउने पो हो कि ?
अर्थ नबुझेसम्म त महत्व पनि त थाहा हुँदैन् ।
द्रोणको छोराको जस्तो आयू होस् , अर्थात द्रोणका छोरा अस्वस्थामा हुन् । एक पटक अस्वस्थामाले अभिमन्यूकी पत्नी उत्तरालाई हतियार प्रहार गरेका हुन्छन्, यसको श्रापमा भगवान कृष्णले उन्लाई ३ लाख बर्षसम्म बाँच्नै पर्ने तथ्यबाट श्रापित गरेका छन् । यस भनाई बाट द्रोणका पुत्रको जस्तो आयू त एउटा प्रत्यक्ष कथन मात्र हो, अर्को तर्फ जीवनको मुल्य अनि असल कर्म गर्न पनि प्रेरित गरिएको छ ।
ऐश्वर्य नहुषे अर्थात नुहष स्वर्गका निमित्त राजा हुन् । देवराज ईन्द्रको अनुपस्थितीमा नहुषले स्वर्गमा राज गरेका हुन्छन् । आफ्नो राजकाजमा अत्यन्त बिलासी जीवन बाँचेका नहुषको जस्तो सुख ऐश्वर्य होस् भनिएको हो । रोचक कथन के छ भनें नहुषले ईन्द्र देव कि श्रीमती सचीको भोग गर्ने लालसा राखेका हुन्छन् र यो दुस्साहसकालागि उन्लाई पृथ्वीमा हजारौं बर्ष किराका रुपमा बाँच्न पर्ने श्राप लागेको हुन्छ ।
ऐश्वर्य को सिमा अनि सत्यताको वकालत पनि नहुष को उदहारणले सबैलाई यस मन्त्र मार्फत गरेको छ ।
पवन अर्थात वायूको जस्तो गति होस् भनेंर अपेक्षा गरिएको छ । घर भन्दा पर हुनुहुन्छ भनें पनि यि नेपालबाट शहने हावाका झोंकाहरुले हामीलाई अनि तपाँईलाई शिघ्रादिशिघ्र देशको माया प्रवाह गरिरहेछन् ।
त्यसै गरि दुर्योधनको जस्तो मान होस् , दुर्योधनले आफूले हार्ने जान्दाजान्दै पनि आफ्नो बचन अनि मानका लागि महाभारत युद्ध लडेका हुन् । आफ्ना मानका खातिर रत्तिभर पनि नझुक्ने दुर्योधनको यो प्रवृतिलाई पनि मन्त्रले समावेश गरेको छ ।
सूर्यका सुत अर्थात सूर्य पुत्र कुन्तीको जस्तो दान गर्ने मनशाय र भाव होस् भनिएको हो । जन्मदै लगाएर आएका कवच पनि ईन्द्रलाई दान दिएका अनि त्यही दानका कारणले कमजोर भएका कर्ण को युद्धमा पराजय र बिरगती हुनजान्छ ।
हलधर अर्थात हलो बोकेर हिड्ने बलरामको जस्तो बल होस् भनिएको हो । भीम, दुर्योधन लगायत अन्य धेरै पौराणीक पात्रहरुका कुस्ती गुरु बलरामको बलको चर्चा शास्त्रहरुले यथेस्ट गरेको छ । कुन्ती पुत्र यूधीस्ठीरको जस्तो सत्यता होस् भनिएको छ, उनले जीवनकालमा केवल एकफेर मात्र झुठो बोलेका भनिएको छ । स्मरण रहोस् हिन्दु धर्मशास्त्रमा सत्य भन्नाले सत्यता मात्र नभईकन पवित्र जिवनशैली पनि हो ।
अन्तमा बिज्ञानका लागि प्रसिद्ध एकजना कलाकौशलताका धनी बिदुर लाई संवोधन गरिएको छ । उनी जस्तै कला, दर्शन अनि सिपमा कौशल रहनु भन्दै माथि उल्लेखित सबैजनाको गुण कायम होस् भनिएको हो ।
जिवन र मृत्यू की नियन्त्रक काली माता जो समयको परिधी बाहीर छिन्, उनी प्रति नमन र मानव खप्पर को माला लगाएकी कपालिनी प्रति हार्दीक नमन
दुर्गतीको नाश गर्ने दुर्गा प्रति नमन अनि एकाकार र सर्बशक्तिमान शिव प्रति नमन । क्षमा की देवी क्षमा प्रति नमन, र सबै जीवकी दाती धातृ प्रति नमन, हरेक यज्ञ र दानपुण्य कि देवी स्वाहा प्रति नमन, मानवका हरेक यज्ञ दानपुण्य कि संक्ल्प देवी स्वधाप्रति नमन । सबैजना देवीलाई हार्दीक नमन
यस पालाको दशैंमा मन्त्र मात्र नभट्याएर आँउदा पुस्तालाई अर्थ पनि बताउने थाल्ने कि ?
दशैं शुभ होस्
जमरा र अक्षताको शुभ प्रभाव कायम रहोस्